Ciidammada ammaanka ee caasimadda Eritrea ee Asmara, ayaa waxa ay dileen dhowr dhalinyara ah oo xoog loogu daray ciidammada, kuwaasi oo isku dayayay in ay ka baxsadaan kolonyo ay la safrayeen, sida ay ku warramayso warbaahinta mucaaradka.
Sidoo kale waxaa jira waxyeelo soo gaartay dad rayid ah kaddib markii qoysaska iyo asxaabta askartaasi qafaalka aheyd ay bas ku gooyeen wadada si ay gacan uga siiyaan in ay baxsadaan, sida lagu sheegay warar aanan la xaqiijin.
Askarta xoogga lagu qoro gudaha waddanka Eritrea ayaa ah mid khasab ah.
Mas’uuliyiinta Eritrea ayaanan ka hadlin dhacdadaasi.
Kooxaha u dooda xuquuda aadanaha ayaa waxa ay u arkaan Eritrea in ay ka mid tahay meelaha tacadiyada ugu badan ay ka dhacaan caalamka.
2015, Weriyayaasha Aan Xudduuda Lahayn (RSF) ayaa warbixin ay daabaceen waxa ay Eritrea kaalinta ugu hoosaysa ka gashay shaxda wadammada aanay ka jirin xuriyatul qowlka.
Askarta xoogga lagu qoro ee Eritrea ayaa toboneeyo sano oo kale sii jiri karta, waana mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee sanadkastaa dalkaasi uga cararayaan tobannaanka kun ee qof.
More in this category: « Kooxda Jahbat Al Nusra Ee Ka Dagaalanta Suuriya Oo Soo Riday Dayaarad Dagaal Gacantana Ku Dhigtay Duuliyihii (Video)	Wasiir Hore Ee Awqaafta Iyo Diinta Dalka Jabuuti Oo Xabsiga Laga Soo Daayey Warbaahintana La Hadlay (Video) »